बु’ढा नेताहरुले अब राजनीतिबाट सन्या’स लिनु पर्छ, युवालाई देश चलाउन दिनु पर्छ : गगन थापा – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/बु’ढा नेताहरुले अब राजनीतिबाट सन्या’स लिनु पर्छ, युवालाई देश चलाउन दिनु पर्छ : गगन थापा
काठमाडौँ / पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले टेस्टेड भैसकेको नेताहरुले अब राजनीतिबाट सन्यास लिएर युवालाई देश चलाउन दिनपर्छ भनेका छन् । शुत्र टिभीको शुत्र बहसमा उनले सो कुरा बताएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले एकाएक अध्यादेश ल्याएर अरुको पार्टी फु’टाउनेसम्मको तयारी गर्दा आफ्नै पार्टी फु’ट्नेसम्मको स्थितिमा पुगेको समेत उनले बताए।
‘एकाएक के सोच्नु भयो एकातिर अध्यादेश ल्याउनु भयो। अर्कोतिर अरुको पार्टी फुटाउन भाडाका मान्छे प्रयोग गरेर सांसद उठाउने काम गर्न थाल्नु भयो।’ उनले अगाडि भने, ‘त्यसको प्रभावले उहाँको पार्टी फुट्नेसम्मको अवस्थामा पुग्यो। सांसदहरुले नै पक्ष र विपक्षमा ह’स्ताक्षर गर्न थाले। यो कसैले निम्त्याएको हो ? कुरो प्रष्टै छ। योभन्दा प्रष्ट कुरो के छ?
महा’मारीका बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भनिएको अनि’यमितताका विषयमा समेत प्रक्रियागत छान’बिन हुने भन्दै आफूहरु चुप बसेको उनले स्मरण गरे। ‘यत्रो ठूलो अनिय’मितता हुँदा पनि महामा’रीको बेलामा हामीले खासै बोलेनौं। विषयान्तर ग’र्नु हुँदैन भन्यौं।’ उनले भने, ‘ हाम्रा यत्रा मान्छे बाहिर छन्।
नेपाल छिर्न पाउने उनीहरुको ह’क हो। उहाँहरुका लागि तपाइले सिमाना’ब’न्द गर्न पाउदैन। तिनलाई कसरी ल्याउने? ल्याएर कहाँ राख्ने ? यो विषयमा त बहसै हुन छोड्यो। सारा देशलाई प्रधानमन्त्रीले अर्कोतिर लग्नुभयो। यो आचर’ण र क्षमता भएको नेतृत्वले हामीलाई म’हासं’कटबाट पार लाउँला ?’ उनले प्रश्न गरे।.
‘ पैसा नहुनेका लागि त काठमाडौं ‘ नाइटमेयर’ हो , न त पानी पर्दा ओत लाग्ने ठाउँ छ , न त टन्टलापुर घाममा छहारी दिने एउटा रूख
श्रीमतिको रुपको श्रीमान् नै बने शत्रु, त्यति सुन्दर आफ्नै श्रीमतिलाई यसरी बनाए कु-रुप, सनमाया रुँदै आइन् मिडियामा (भिडियो हेर्नुहोस्)